Madaxweyne Waare oo soo xiray Bandhigga Maalgashiga Ganacsiga iyo Beeraha – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By kullane / September 17, 2019 September 17, 2019
Baladweyne.(SONNA)...Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa soo xiray Shirwaynaha Bandhigga Ganacsiga iyo maalgashiga Beeraha, kaasi oo labadii maalin ee la soo dhaafay ka socday Magaalada Caasimada ah ee Jowhar.
Shirkani ayaa waxaa isku soo duba riday Hey'adda GEEL oo garab ka heleysa Hey'adda USAID, waxaana ka qeyb galay xuhno ka tirsan labada gole ee Dowladda Hirshabelle, Ganacsato, xubno ka soday Shirkadaha Ganacsiga qeybihiisa kale duwan, iskaashatooyinka dhinaca beeraha, Hey'adda ka shaqeeya caafimaadka xoolaha, qubaro iyo Mas'uuliyiin kale.
Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlayay xiritaanka bandhiga ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta ahmiyada dalkani qaniga ku ah kheyraadka uu u leeyahay wax soo saarka dalkeena, waxaana uu ku amaanay intii ka shaqeysay in barnaamijkani uu hirgalo, waxaana uu ku dhiira galiyay shirkadaha ganacsi ee soo bandhigay ganacsigooda ee dhanka wax soo saarka Dalka.
"Dalkeena gaar ahaan Hirshabelle waxa ka buuxa kheyraad fara badan oo u baahan in laga faa'ideysto sidaasi daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in aan garano muhiimada Wax soo saarkeenu uu inooo leeyahay, waxaana ku dhiira galinayaa Beeraleyda iyo shirkadaha Ganacsiga wax soo saarka in dadaalkoodu ay laba jibaaraan, barnaanijyada noocaan ahna oo Hirshabelle maalgashiga loogu sameynayo waan sii kordhin doonaa insha'allay" ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle oo sii hadlay ayaa beeraleyda Hirshabelle ku dhiira galiyay in ay ka dhabeeyaan mira dhalka dadaalka ay ugu jiraan tacbashada wax soo saarka dalkeena, waxaana ka Hirshabelle ahaan uu balanqaaday màdaxaweynaha in beeraleyda iyo xoola dhaqatadaba ay ka saacidi doonaan dhinacyada horumarinta wax soo saarka iyo xoolaha.
Madaxweynaha Hirshabele ayaa codsaday in dowlada federalka ay ka shaqeyso gobolada dalka maadaama horumarka uu ku xiran yahay sugidda nabadgelyada.